Yan Aung: အိတ်စ်ကွတ်မီနဲ့ ဆမ်းသင်းမ်လောင်း.....
တဟေး ဟေးး ရယ်လို့ပြေး..””
ဟဟ ကိုရန်အောင်ကြီး လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ.
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး သဘောတော့ ပေါက်မိခဲ့ပါရဲ့..
ဟုတ်တယ်နော်.. တရုတ်တွေ ဂျပန်လိုပြောတာလဲ
ဟန် အသံထွက်ပုံနဲ့ ပြောပြရင် တော်တော် ရယ်ရတာပဲ.
ရီလိုက်ရလို့လေ။ တီလုပ်မလေးက လှလားဗျ
အိတ်စ်ကွတ်မီ လေထီး အန် ဂျင်တန်မန်း..... ဆုန်သင်းပါရ် ...အဲလေ ... ဆန်သွန်းလောင်း...စောရီ...ဥ(စ်)… ဆမ်းသင်းမ်လောင်း
မခင်ဦးမေ က ဆမ်းသင်းမ်လောင်း ဆိုပြီး လာအော်သွားလို့ နောက်ခံ ဇာတ်လမ်းသိရအောင် အပြေးလာဖတ်ကြည့်တာ။ အဲဒီ တရုတ်မလေးက ချောလား ဟင်... ကိုရန်အောင့် သူငယ်ချင်းကို တဆင့် မေးကြည့်တာပါ။ ဟဟ...